Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika: Hanomboka ny kobaka am-bava
Politika: Hanomboka ny kobaka am-bava
Ny fifidianana dia adikan’ny olona hoe kobaka ambava. Amin’io fotoana io no mampanao ny fampanatenainy poakaty ireo izay milaza fa mpanao politika Malagasy. Lazaina avokoa izao zavatra tsy hay sy tsy ho vita izao mba hisintonanana ny vahoaka hifidy ny kandidà iray. Lazaina avokoa izao atsanga tsy aman’orana rehetra izao, ka lainga sy fitaka no anaovana kabary ambony vavahady handresena lahatra ny mpifidy.
Manomboka izao dia tsy maintsy hilaza mahakasika ny olana aram-piaraha-monina sy ekonomika niainan’ny vahoka Malagasy tao anatin’ny efa-taona izay ny kandidà izay hilatsaka eo. Na ireo efa nitondra na ireo izay izao vao hilatsaka dia tsy maintsy izany no hataon’izy ireo litania. Tsy maintsy hiresaka momba ny kolikoly, ny fangalarana ny volam-panjakana, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny asa-dahalo ary ny fandriampahalemana ambanivohitra, ny kidnapping, ny fampianarana, ny fahasalamana ary ny fananan-tany sy ny fanjakazakan’ny mpanam-bola vahiny sy tompon-tany amin’izany. Hilaza fa hiaro ny andramena sy ny harena ankibon’ny tany koa izy rehetra ireo. Tsy maintsy hidradradradra momba ny ady amin’ny fahantrana izay mamely mafy ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao avokoa rehefa mikabary sy miseho amin’ny haino aman-jery.
Horaisin6tsika ohatra akaiky ny zavatra ataon’ingahy filoham-pirenena ankehitriny sy ingahy filohan’ny tetezamita. Ireo no akaiky indrindra ka tsara hatao ohatra izany.
Ingahy Hery Rajaonarimampianina sy Andry Nirina Rajoelina dia efa nanambara ny “fisandratan’i Madagasikara” sy ny “emergence de Madagascar” izay zavatra iray ihany no resahina ao anatiny, ary fantatra fa olona iray no namolavola azy. Nanaovan’izy roalahy ireto izay nifandimby toerana fanambarana lehibe ny mahakasika ireo vina roa ireo. Ingahy Hery Rajaonarimampianaina izay filoham-pirenena ankehitriny dia toa ireny artista mpanao teatra an-dapihazo ireny raha nanazava io fisandratana io teny Iavoloha. Ingahy Andry Nirina Rajoelina indray dia nampiasa ny haino aman-jery iraisam-pirenena sy Malagasy mba hilazana fa manana vina sy tetika tsara hitondrana an’i Madagasikara ka hialany amin’ny fahantrana izao hono. Dia mazava ho azy ny kobaka am-bava ataon’izy roalahy ireto satria efa nitondra daholo izy ireo nefa fahantrana mihoampampana no vokatry ny fitantanana ny firenena nataony.
Ingahy Andry Rajoelina dia mbola manonofy ny kobaka am-bava nataony tamin’ny taona 2008-2009 nandreseny lahatra ny vahoaka Malagasy ka nanonganana an’I Ravalomanana Marc. Nilaza fa hitondra vaha olana amin’ny fitondrana nentin’ingahy Ravalomanana Marc izy, nefa voa maika nampitondra faisana ny Malagasy ny nataony. Fangalarana harem-pirenena, fanondranana antsokosoko andramena sy volamena naondrana tany ivelany, ary famitahana ny vahoaka Malagasy nomba azy tamin’ny lafiny maro. Nisy mihitsy aza no maty vokatr’izany. Namitaka ny tanora natoky azy ingahy Andry Rajoelina satria tamin’ny andro nitondrany no nofoanana ny asa aman’hetsiny teto Madagasikara ka nahatonga ny tanora Malagasy nivarilavo nanao andevo antsi-trapo any amin’ny firenena arabo toa an’i Koweït, Liban, Arabie, Maurice ary Chine. Tena nanaiky nandevozina antsitra-po ny tanora Malagasy nohon’ny nataon’ity filohan’ny tetezamita ity.
Ingahy Hery Rajaonarimampianina indray dia milaza fa amin’ny 2030 no tanjona. Fa angaha izy mieritreritra hitondra firenena eo hatramin’izany fotoana izany? Tena manao ny Malagasy ho dondrona sy ketrona mihitsy izany. Ny fandrafetana ity “Madagasikara misandratra” ity dia tena kobaka am-bava araka ny voalaza tary ambony. Fa maninona no tsy nampiasany io tetika io tao anatin’ny efa-taona nitondrany ny firenena izay? Tena fandrebirebena ny Malagasy tanteraka no ataony. Aiza ve ka izay mpitondra fanjakana rehetra sy mpanao politika manao kabary dia samy milaza fa “misandratra i Madagasikara” ankehitriny. Tena mahamenatra tanteraka ny zava-misy.
Izany no hamitahana ny Malagasy indray ankehitriny. Efa fantatra tanteraka avokoa ireo olona milatsaka ireo ka aoka tsy ho voafitaka indray isika vahoaka. Tandremo dia tandremo sy famitahana amin’ny alalan’ny fizaram-bola hataon’ireo mpanao politika ireo. Tena ho be dia be ny vola hiparitaka, 2000ar, 5000ar, 10000ar ary hatramin’ny 20 000ariary izay hividianana an-tsika to any efa nitranga tamin’ny 8 martsa lasa teo iny. Hozakaina mandritry ny 4 taona indray ireny raha tsy misaina ny vahoaka.
Ho marobe ny hilaza ny zavatra tiany hatao ireo olona hilatsaka ho filoham-pirenena ireo. Ho be dia be izy ireo, hanakarama olona sy hizara vola, hanao litania etsy sy eroa, hizara zavatra maro isan-karazany, ary hilaza fa ho tia tanindrazana avokoa.
Aoka tsy ho azon’izany intsony isika Malagasy ka hahalala tsara ny olona tokony hofidina. Fantaro tsara ny tantaran’ny olona izay hofidina. Inona no andraikitra efa nataony teto amin’ny firenena, ary nanao ahoana no nanatanterahany izany. Raha mbola tsy nangalatra, tsy namitaka vahoaka tamin’ny fomba maro samihafa, manana fahendrena sy manana fahalalana amin’ny fitondrana firenena, ary olona matahotra an’Andriamanitra. Manaja ny soatoaviny Malagasy ka olona tsy manavakavaka no tokony hofidina hanarina izao firenena latsaka an-kady izao.
Tandremo fa be no hanao kobaka am-bava indray amin’ny fifidianana hoavy izao.